SDL: Mizarà hafatra mifangaro miaraka amin'ireo mpanjifanao manerantany | Martech Zone
Androany, ny mpivarotra izay mitady ny fomba haingana sy haingana indrindra hitantanana ny traikefan'ny mpanjifany dia mitodika mankany amin'ny rahona. Io dia ahafahan'ny rakitry ny mpanjifa mivezivezy miditra sy mivoaka amin'ireo rafitra marketing tsy misy fotony. Midika koa izany fa ny mombamomba ny mpanjifa dia manavao tsy tapaka ary ny angona angon-drakitra ho an'ny mpanjifa dia noforonina avy hatrany tamin'ny fotoana tena izy, manome fomba fijery feno momba ny fifandraisan'ny mpanjifa manerana ny orinasan'ny marika.
SDL, ny mpamorona ny Cloudy Experience ho an'ny mpanjifa (CXC), dia milaza fa ny mpivarotra mitantana ny traikefan'ny mpanjifany amin'ny rahona dia tsy mahay mitantana fampielezan-kevitra fotsiny, fa mamorona tsingerim-pifandraisana mitohy izay mahatratra ny mpanjifa amin'ny fe-potoam-piasan'izy ireo. Andao hojerentsika ny fomba fiasan'izany:
Ao anatin'ity horonantsary etsy ambony ity dia fantatrao fa ny SDL CXC dia manome traikefa tsy misy tohika sy tarihin'ny data isaky ny teboka amin'ny dian'ny mpanjifa - manerana ny fantsona, fitaovana ary fiteny. Ao amin'ny sehatra tokana misy an'i SaaS, ny CXC dia manome ny efitrano fitantanana ny traikefa ho an'ny mpanjifa (CX) voalohany ao amin'ny indostria izay mampiditra votoatin'ny sosialy, tranonkala, fanentanana, e-varotra, Analytics ary fitaovana fitantanana antontan-taratasy. Ny CXC koa dia mifamatotra amin'ny SDL Language Cloud mba hahafahan'ny marika mampitombo ny fahafahany mifanerasera amin'ireo mpanjifa amin'ny fiteniny sy ny kolontsain'izy ireo.
SDL Customer Experience Cloud (CXC) dia sehatra teknolojia tafiditra izay ahafahan'ny orinasa mandefa traikefa tsy misy tohika sy miainga avy amin'ny data amin'ny mpanjifa isaky ny mandeha amin'ny fividianana dia - manerana ny fantsona, fitaovana ary fiteny rehetra. 72 amin'ireo marika 100 manerantany no mampiasa ny haitao SDL hanomezana traikefa ho an'ny mpanjifa ambony.
Ny fomba fiasa tokana an'ny SDL dia manome ny mpivarotra fomba fijery miray amin'ny fifandraisan'ny mpanjifany. Avy amin'ny toerana iray, ny marika dia afaka mahita ny fahombiazan'ny paikadiny ary manao fanitsiana tsy miova amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa rehetra, na maka fomba granular bebe kokoa raha ilaina izany.
Ity misy ohatra iray amin'ny interface user CXC:
Ny SDL CXC dia mampanantena fomba haingana sy mora kokoa ho an'ny mpivarotra hifaneraserana amin'ny mpanjifany ary manome hery azy ireo:
Mahatsapa fifanakalozan-kevitra momba ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fanangonana angon-drakitra ho an'ny mpanjifa isaky ny teboka ifandraisana mba hampahafantarana ny fanapaha-kevitra momba ny varotra sy ny vokatra
Manaterà fanentanana nomerika manan-tsaina amin'ny fampiasana Analytics ary mikendry ny fifandraisana amin'ny fampielezan-kevitra ho an'ny mpanjifa ankehitriny
Traikefa misy ifandraisany amin'ny hery lehibe amin'ny alàlan'ny famakafakana ireo mombamomba sy fitondran-tena amin'ny fotoana tena izy mba hamoronana fandefasana mifototra amin'ny mifototra amin'ny fitaovana, ora amin'ny andro, toerana, fiteny, tantaran'ny mpanjifa sy maro hafa
Mpanjifa SDL, Schneider Electric, manam-pahaizana manokana momba ny fitantanana angovo dia nahatsikaritra fa ny sehatra tokana sy ny rahona mifototra amin'ny rahona dia nahatonga ny fanatanterahana ny tanjon'izy ireo tamin'ny fanomezana traikefa mpanjifa mitambatra sy tsy misy tohiny. Ny orinasa dia miovaova manerana ny firenena maherin'ny 100 sy ny orinasa maro. Niatrika fanamby iraisana ho an'ny marika manerantany sy orinasa izy ireo: Ahoana no ahafahan'ny orinasa manana zara-vokatra sy vahaolana isan-karazany zaraina, miasa manerana an'izao tontolo izao, hamoaka zavatra mifandraika, tsy miova ary haingana ho an'ny mpanjifa sy jeografia rehetra tompoin'izy ireo?
Mba hahatratrarana izany filàna izany dia nitady vahaolana miorina amin'ny tranonkala izy ireo izay hiompana amin'ny paikadin'izy ireo amin'ny varotra dizitaly, hampifanaraka izany amin'ny traikefan'ny mpanjifa dizitaly ary hamela ny haavon'ny elanelam-potoana mety hanitsy ny filan'ny mpanjifa eo an-toerana. SDL dia nanome izany.
Izahay dia liana amin'ny fivoarana hatrany ny traikefanay amin'ny Internet manodidina ny mpanjifanay sy amin'ny fanomezana izay ilain'izy ireo miovaova mandrakariva. Mino izahay fa ny SDL dia napetraka tsara hanampy antsika hanova ny tranonkalantsika ho lasa traikefa manokana manokana, mamaly ny filàna manokana an'ny mpanjifa tsirairay. Rehefa manome an'ity ambaratongam-pifandraisana ity amin'ny mpanjifanay an-tserasera izahay dia mahazo valiny haingana kokoa amin'ny filan'izy ireo, mitombo ny tsy fivadihan'ny marika ary mandresy ny tontolo iainana manontolo. Shawn Burns, Filoha lefitra zoky ny Marketing amin'ny Internet sy nomerika ao amin'ny Schneider Electric
Mianara bebe kokoa momba ny fomba Schneider Electric dia mampiasa ny SDL CXC, kitiho eto. Mianara bebe kokoa momba ny Cloud Cloud Experience amin'ny SDL.
Tags: cross-fantsonacross-fitaovanacross-tenyangon-drakitra ho an'ny mpanjifarahona traikefa an'ny mpanjifafitantanana traikefa amin'ny mpanjifafifandraisan'ny mpanjifatsingerin'ny fifandraisan'ny mpanjifafifandraisan'ny mpanjifacxfitantananamaneran-fandefasan-kafatra manerantanyHyper-danjatraikefa natokana ho an'ny mpanjifasuite fitantanana traikefa an-tserasera an'ny mpanjifafanentanana nomerika manan-tsainatsingerin'ny fifandraisanairaisam-pirenenafandefasan-kafatra iraisam-pirenenaamin'ny fotoana katrokasaasSchneider Electricsdlsdl cxcrahona fiteny sdlShawn Burns
Torohevitra 5 hanovana am-pahombiazana ny vinavinanao an-tserasera ho mpanjifa